Health Sarokar | औषधि सेवन गर्ने उचित समय कुन हो? “ड्रग क्रोनोथेरापी”ले के भन्छ?
औषधि सेवन गर्ने उचित समय कुन हो? “ड्रग क्रोनोथेरापी”ले के भन्छ?
केही औषधि बिहान खालि पेटमा सेवन गरिन्छ अनि केही औषधिको उचित प्रयोग भनेको खाना खाएपछि हो। त्यस्तै गरी निन्द्रा लगाउने औषधिहरू राती सुत्नु अघि सेवन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन।
हामी बिरामी पर्दा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि प्रयोग त गर्दछौँ तर सो औषधि प्रयोग गर्ने उचित समय के हो त भन्ने कुरालाई हामी कत्तिको महत्त्व दिन्छौँ? बिरामी हुँदा जसरी औषधिको सेवन गर्न जरुरी छ त्यसरी नै उक्त औषधि उचित समयमा खान पनि उत्तिकै जरुरी छ। कुनै औषधि दिनमा एक पटक प्रयोग गर्ने भनेर दिइएको हुन्छ, त्यो औषधि कति बेला प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो पनि होइन कि समय नमिलेको अवस्थामा सो औषधिले केही काम नै गर्दैन तर असर चाहिँ धेरै कम हुन सक्छ र प्रतिकूल असर पनि बढी देखिन सक्छ भन्ने हो।
ड्रग क्रोनोथेरापी भन्नाले हाम्रो शरीरको दैनिक चक्र (सर्कार्डियन रिदम) अनुसार औषधिको प्रयोग गर्नु हो, जसले गर्दा सो औषधिको प्रभावकारिता बढी हुन्छ र सँगसँगै प्रतिकूल असर पनि कम हुन्छ। क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको प्रतिकूल असर धेरै हुने र सो उपचार विधि समय तालिका अनुसार अपनाउन सकेमा धेरै सजिलो हुने र प्रतिकूल असर पनि कम हुने धेरै अनुसन्धानले देखाएका छन्।
हामी धेरै जसोले बुझेको औषधिको सेवन गर्ने समय भन्नाले खाना अघि वा खाना पछि सेवन गर्ने भन्ने हो। हामी केहीलाई थाहा होला ग्यास्ट्राइटिसमा प्रयोग गरिने "प्यान्टोप्राजोल", "ओमेप्राजोल" जस्ता औषधि बिहान खालि पेटमा सेवन गरिन्छ अनि दुखाई कम गर्ने औषधिको उचित प्रयोग भनेको खाना खाएपछि हो। "प्यान्टोप्राजोल" र "ओमेप्राजोल" जस्ता औषधि खाना खाएपछि खाँदा उक्त औषधिले गर्नु पर्ने प्रभाव कम हुन्छ, यस्ता औषधि अम्लीय वातावरणमा मात्र सक्रिय हुन्छ, त्यसैले यी औषधि एन्टासिडसँग पनि प्रयोग गर्दा फाइदा हुँदैन। हामी धेरै जसो मानिस दिनमा तीन पटक खानु भनिएको औषधि पहिलो बिहानको खाना पछि, दोस्रो दिउँसोको खाजा पछि र तेस्रो रातिको खाना पछि खाने गर्दछौँ। दिनमा तीन पटक सेवन गर्नु भनिएको औषधि खासमा आठ आठ घण्टाको फरकमा खाने भन्ने बुझिनेमा माथि भनिए जसरी सेवन गर्दा राति धेरै समयको अन्तर रहने र दिनमा त्यो अन्तर कम हुने देखिन्छ। तसर्थ रातिको समयमा औषधिले काम गर्न छोड्न सक्छ भने दिनमा चाँडै चाँडै औषधि सेवन गर्दा औषधिको प्रतिकूल असर बढी पनि देखिन सक्छ। सामान्यतया "स्टेरोइड" औषधि सेवन गर्ने एका बिहानै हो, हाम्रो शरीरले स्टेरोइड धेरै जसो बिहानको समयमा बनाउने कारणले गर्दा पनि सो औषधि बिहानै सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरले बेलुका ८ बजे देखि मध्यरात सम्म सबैभन्दा बढी मात्रामा कोलेस्ट्रोल बनाउँछ, त्यसैले "अटोरवास्टाटिन" जस्ता कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधि राती सुत्नु अघि खानु उत्तम मानिन्छ।
"आइरन", "क्याल्सियम" जस्ता औषधि खालि पेटमा खाँदा वाकवाक लाग्ने अनि बान्ता हुन सक्ने हुन्छ, तसर्थ यस्ता औषधि खाना पछि र एउटा बिहान र अर्को बेलुका गरेर खान ठिक हुन्छ। एंटीबायोटिक खाने उचित समय खाना अघि वा पछि भन्ने कुरा प्रयोग गर्ने एंटीबायोटिकमा नै भर पर्दछ। केही औषधि त खानाको बिचमा खाने किसिमका पनि हुन्छन्। मधुमेहका बिरामीले सेवन गर्ने "अकारबोज" नामक औषधि खानाको पहिलो गाँस पछि खाने सुझाव दिइन्छ। अनि कुनै औषधि चिल्लो खानासँग खाँदा शरीरमा उचित मात्रामा प्रवेश गर्ने पनि हुन्छन्।
ड्रग क्रोनोथेरापी अमेरिका, युरोप अनि एसियाका केही देशहरूले अपनाउँदै आएका छन्। सन् १९६० मा नै स्टेरोइड बिहानै सेवन गर्नु राम्रो भनेर "ड्रग क्रोनोथेरापी" को बारेमा प्रमाण आई सक्दा पनि यो विधामा अनुसन्धान धेरै अघि बढिसकेको भने छैन। नयाँ औषधिको आविष्कार गर्न लामो समय लाग्छ र मनग्य रकम खर्च हुन्छ। त्यसैले पनि अहिले प्रयोगमा आएकै औषधिहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन "ड्रग क्रोनोथेरापी"ले धेरै सघाउने बायो मेडिकल अन्वेषकहरूको धारणा छ। ड्रग क्रोनोथेरापीले सबै औषधिलाई "राम बाँड" बनाउने होइन तर पनि यस विज्ञानले अहिले भइरहेका धेरै औषधि तथा उपचार विधिहरूलाई सुधार गर्न भने पक्कै पनि मद्दत गर्ने सोच विज्ञहरूको छ। उनीहरू भन्छन् हामीले प्रयोग गर्ने औषधिको समय तालिका मात्रको परिवर्तनले यदि बिरामीमा प्रतिकूल असर कम हुन्छ र औषधिले राम्रो सँग काम गर्छ भने त्यो ठुलो कुरा हो। औषधि प्रयोग गर्ने उचित समय थाहा पाउन सके र त्यही अनुसार सो औषधिको प्रयोग गर्न सकेमा हामी अहिले भएका औषधिबाट नै धेरै लाभ लिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यी सबै कुरा थाहा पाई उचित समयमा प्रयोग गर्न अब हामीले त्यसबारेमा जानकारी लिन तिर पो लाग्ने हो कि?